मायालु सुगा – मझेरी डट कम
भर्खरै उड्न मात्र सिकेको सानो सुगा रूखमा बसिरहेको थियो । उसको आँखा पासोमा परेर छटपटाइरहेको मृगमा पर्यो । ऊ हतारहतार उड्दै त्यहाँ पुग्यो ।
मृगले रुँदै भन्यो, ‘‘सुगा भाइ मलाई बचाऊ म मर्न चाहन्नँ ।’’
सुगा कुनै उपाय निकाल्छु भन्दै भुर्र उड्यो । ऊ आत्तिदै यताउता मुसा खोज्न थाल्यो । अहँ पाएन । ऊ निराश भएर के गरौँ के नगरौँभनेर सोचिरहेको थियो । उसले मुसा च्यापेर उडिरहेको कागलाई देख्यो । ऊ सकिनसकी उडेर काग नजिकै पुग्यो ।
मुसो चुँचुँ गर्दै कराइरहेको थियो । सुगाले खुसी हुँदै भन्यो, ‘‘काग दाइ बिन्ती मेरो कुरा सुन । त्यो मुसालाई नमार, कराएर मुसा नखसाल उसको धेरै ठुलो काम छ । तिमी बिस्तारै भुइँमा बस दाइ म पनि बस्छु ।
काग रिसाउँदै भुइँमा बसेर मुसालाई खुट्टाले च्याप्दै भन्यो, ‘‘म धेरै भोको छु ? म किन यसलाई नमारौँ मार्छु ।’’
सुगाले नम्र भएर भन्यो, ‘‘तिम्रो पेट भराउँने जिम्मा मेरो भयो । म तिमीले जे भन्छौँ त्यही खान दिन्छु । हेर त्यहाँ मृग छटपटाइरहेको छ । छिटो उसलाई छुटाऊँ नत्र पापी सिकारीहरूले उसलाई मार्छन् ।
कागले रिसाउँदै भन्यो ‘‘ल ल ठिक छ । पासो काटेपछि मात्र …….।
मुसाले आँसु झार्दै भन्यो, ‘‘म पनि कागको चुच्चाले च्याप्दा केही घाइते भएको छु । त्यत्रो जाल एक्लै काट्न पनि सक्दिनँ । हामीलाई पक्कै नमार्ने भए त्यहाँ दुलो रहेछ म अरू मुसासँग सहयोग माग्छु ।’’
सुगाले खुसी हुँदै भन्यो, ‘‘तिमीले ठिक भन्यौ । विश्वास गर तिमीहरूलाई केही हुँदैन । बरु चाँडै गर ।’’
अजिङ्रगरको आहारा दैवले पुर्याउँछ भनेको सहिरहेछ । अहा ! अब अरू मुसा खान पाइने भयो भनेर काग साह्रै खुसी भयो ।
मुसा नजिकै रहेको दुलामा पस्यो । छिन भरमै तीनवटा मुसा दुलोबाट निस्केर मृग भएतिर खुरुरु दौडिए । सुगा र काग पनि त्यतै उडे । मुसाहरूले ढिलो नगरी जाल काटिदिए ।
मृगले खुसी हुँदै भन्यो–“मलाई पीडाबाट मुक्त गरिदिएकोमा मुसालगायत सुगा र काग सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ । आफ्ना आमाबाबु र बथानबाट छुट्टाउने त्यही नाथे चितुवा हो । चितुवाले लखेटेपछि भाग्दैभाग्दै म यहाँ आएको त जालमा पो परेँ । अब कहाँ जाऊँ के गरौँ ?’’
सुगाले नम्र स्वरमा भन्यो, ‘‘पीर नगर दाइ ! हामी तिम्रो आमालाई खोज्न मद्दत गर्छौँ ।’’
कागले मुसातिर हेर्दै भन्यो, ‘‘कति आमा सामाको कुरा गरेका ? काम सक्की नै हाल्यो । धेरै होइन दुइटा मुसा त म खान्छु नै ।’’
!सुगाले सम्झाउँदै भन्यो, ‘‘काग दाइ तिम्रो गुन हामी कहिल्यै भुल्ने छैनौँ । यस्तो ज्ञानी मुसालाई नखाऊ । मैले तिम्रो आहारा जुटाउँन सकिनँ भने बरु मलाई नै खाउला नि हुन्न ?’’
यस्ताको के कुरा सुन्नु भन्दै काग ठुलो मुसा च्यापेर के उडेको थियो । त्यही जालमा कागको खुट्टा अड्कियो । दुखेर काँ गरी कराउँदा मुखबाट मुसा फुत्कियो ।
मुसा बचेकोमा खुसी हुँदै सबैले कागतिर हेरे । काग लाजले निहुरियो । खुट्टाको जाल निकाल्न धेरै कोसिस गर्यो तर सकेन ।
मृगले सम्झाउँदै भन्यो, ‘‘हेर काग दु’ख सुख भनेको सबैलाई पर्छ । दु’ख अरूलाई मात्र पर्छ भनेर सम्झनु गलत हो ।’’
सुगाले सम्झायो, ‘‘हेर मलाई देखेपछि बुढादेखि बच्च सम्मले जे खान माग्यो त्यही दिन्छन् । मेरो रूप मेरो बोली सबैलाई साहै्र मन पर्छ नि ! त्यही भएर म खुसीले बाँचेको छु । कुनै मूर्खले भने थुन्छन् पनि तर म नथुन्ने घरमा मात्र जान्छु । तिमीले जे भन्छौ म त्यही मागिदिउँला हुन्न ? धन्न तिम्रो खट्टा अड्कियो र मुसाको ज्यान बच्यो नत्र….।’’
त्यही मुसाले डराउँदै जाल काटिदियो । कागले आँसु झार्दै भन्यो, ‘‘अबदेखि म कुनै सोचविचार नगरी कुनै गलत काम गर्दिनँ । मलाई माफ गर साथी हो ।’’
मुसाले नम्र स्वरमा भन्यो, ‘‘भोकले गर्दा नै हामीले पाप गर्छौँ । यस्तो सुक्खा मौसम छ । काग दाइको कुनै दोष छैन ।’’
मुसातिर हेर्दै सुगाले भन्यो, ‘‘तिम्रो कुरा त ठीकै हो मुसा भाइ तर मैले खान दिने कुरा गरेकै थिएँ नि ! लाग्छ तिमीहरू पनि भोका छौ ।’’
मुसाले मुन्टो हल्लाएर हो भन्ने सङ्केत गर्यो । सुगाले सबैतिर हेर्दै भन्यो, ‘‘ल मुसा र कागको भोक मेटाउने जिम्मा र मृगको आमा भेटाउने जिम्मा पनि मेरो भयो ।’’
सुगाको सुन्दर शरीर, मीठो बोली सहयोगी भावना देखेर सबै खुसी भए । सबैलाई सुगाको साह्रै माया लाग्यो । मृगले हाँस्दै भन्यो, ‘‘तिमी सधैँ सबैको प्यारो बन भाइ !’’
मुसा र कागले पनि त्यसै भने । सुगाले खुसी हुँदै भन्यो, ‘‘तिमीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ । ल उडौँ काग ! मैले धेरै काम गर्नु छ ।’’
काग सुगासँग उड्यो । मुसा र मृगले खुसी हुँदै मायालु सुगा र काग उडेतिर हेरिरहे ।
शिक्षा ‘ दु’ख सुख भनेको सबैलाई पर्छ । अरूलाई दु’ख पर्दा खुसी हुनु मूर्खता मात्र हो ।
प्रकाशित, कोपिला,पुस २७, आइतबार